Miswe 4.13 inosvika ine zvigadziriso, Tor 10.0.5 uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni ye Miswe (Iyo Amnesic Incognito Live System) 4.13 yakatoburitswa kare uye inowanikwa kuti utore nekuisa kune veruzhinji.
Iyi vhezheni itsva yekuparadzira inomiririra kusanganisira iyo ichangoburwa vhezheni yewebhu browser Tor 10.0.5, pamusoro peiyo bhatani rakawedzerwawo kutanga Miswe mushure mekugadzira chikamu chekuchengetedza data rinoramba riripo uye nedzimwe shanduko.
1 Main nyowani maficha eMiswe 4.13
2 Dhawunirodha Miswe 4.13
2.1 Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 4.13?
Main nyowani maficha eMiswe 4.13
Mune vhezheni itsva yeMiswe zvakasiyana zvikamu zvehurongwa zvakagadziridzwaay yezvakanyanya kukosha zvinoratidza kuiswa kweshanduro nyowani ye Tor Browser 10.0.5 uye Thunderbird 78.4.2, iyo inouya neyakavakirwa-mukati OpenPGP rutsigiro (yakamboburitswa 68.12), kubvira iyo Enigmail yekuwedzera inotsiviwa.
Shanduro itsva ye Tor 10.0.5 iri mukuenderana neFirefox 78.5.0 base kodhi ESR, iyo yakagadzirisa 19 kudzvinyirira uye zvakare inouya nesarudzo yekusarudzika yeiyo nyowani "PraxedisGuerrero" ye obfs4 inogoneswa.
Imwe novelty inomira pachena ndiyo nyowani bhatani rakawedzerwa kutangazve Miswe mushure mekugadzira partition yekuenderera kwedata rekuchengetedza (Izvi zvinonyanya kuratidzwa pakupera kwemaitiro uye zvinoita kuti zvive nyore kumushandisi kutangazve sisitimu).
Iyi midzi yekuparadzanisa yakagadzirwa nekuchengetedza kusingaperi inogumira pakuverenga-chete kuwana nemidzi chete.
Kunyange, yeDotfiles vanoshandisa vashandisi kuramba uchichengetedza, Nzvimbo -> Dotfiles marongero anopihwaque inobvumira kuwana kune zvirimo mune isina kuvhurwa dhairekitori / rarama / kushingirira / MisweData_isina kuvharwa / madhiraivha kubva kumaneja faira.
Iyo seti yemafaira ekushandura yakaderedzwa kusvika kungove mitauro yakataurwa muchiratidziro yekutambira, iyo inobatsira kubva kudzikisa saizi yeiyo system mufananidzo ne5%.
Uye zvakare zvinoratidzika kuti TCP timestamps modhi rutsigiro inosanganisirwa (sysctl net.ipv4.tcp_timestamps), iyo inobvumidza kuwedzera kugadzikana kwebasa mune inononoka kutaurirana nzira.
Nezve matambudziko akagadziriswa mushanduro itsva iyo gadzirisa mubhatani re "Gadziridza" remusimudziri neMiswe paunenge uchimhanya muCroatia, Danish, French, Hebrew, Macedonian, Simplified Chinese, uye Turkish.
Uye izvo zvakare izvozvi zvave kugona kuwedzera vhoriyamu yezwi riri pamusoro pe100%.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni yekuparadzira, unogona kutarisa iyo ruzivo mune chiziviso. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Dhawunirodha Miswe 4.13
Mufananidzo wakawanikwa kubva muchikamu chekurodha chiri 1 GB ISO chifananidzo chinokwanisa kushanda mune live mode.
Izvo zvakakoshawo kuti utarise kuti iyi nyowani vhezheni yeMiswe 4.13, sevakawanda vayo vayakatangira, inogadzirisawo mamwe maburi ekuchengetedza, saka vagadziri vayo vanokurudzira zvakasimba kuti iwe uvandudze iyi vhezheni itsva kana iwe uri mune yakapfuura.
Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 4.13?
Kune avo vashandisi vane vhezheni yechinyakare yeMiswe yakaiswa uye vanoda kusimudzira kune iyi vhezheni itsva. Ivo vanofanirwa kuziva kuti iko kusimudzira kwakananga kuMiswe 4.13 kunogona kuitwa zvakananga kubva kuMiswe 4.2 kana kupfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Miswe 4.13 inosvika ine zvigadziriso, Tor 10.0.5 uye nezvimwe